Weerar isugu jiray qaraxyo iyo mid toos ah oo lagu qaaday xarunta Sheekh C/weli Cali Cilmi… – Hagaag.com
Weerar isugu jiray qaraxyo iyo mid toos ah oo lagu qaaday xarunta Sheekh C/weli Cali Cilmi…
Posted on 26 Nofeembar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar isugu jiray qaraxyo iyo mid toos ah oo saaka waaberigii hore lagu qaaday xarun uu Koonfurta magaalada Gaalkacyo ka degenaa Wadaad muran badan ka dhex dhaliyay bulshada, kaasoo lagu magacaabi jiray Sheekh C/weli Cali Cilmi Yare.
Qaraxyo ismiidaamin ah oo loo adeegsaday gaari ayaa lagu weeraray xarunta wadaadka, iyadoo qaraxa kadib ay xarunta gudaha u galeen dabley hubeysan.
Wararka ayaa sheegaya in weerarka lagu dilay Sheekh C/weli Cali Cilmi Yare, Xaaskiisa iyo 13 kale oo xertiisa ka mid aheyd.
Ciidamada Ammaanka Galmudug ayaa la sheegay inay toogteen qaar ka mid ah raggii weerarka ka dambeeyay, iyadoo la qabtay mid ka mid ah ragga weerarka ku qaaday xarunta, kaasoo qaba dhaawac.
Sheekhan oo muran badan ka dhex dhaliyay bulshada Soomaaliyeed, markii baraha bulshada lagu faafiyay muuqaal uu ka soo muuqday iyo sawir uu la meel dhigay Nabi Muxamed (NNKH), waxaana Maxkamad la soo taagay sanadkii hore ay sii deysay, kadib markii uu iska fogeeyay inuu Nabinimo sheegtay ama uu sawiray Nabi Muxamed (NNKH), isagoo sheegay in sawirka uu ahaa macalinkiisa.
Hase ahaatee muddooyinkii u dambeeyay ayaa waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaal uu dhalinyaro Muusik iyo Nabi ammaan ku barayay xaruntiisa, waxaana inta badan xerada degenaa dhalinyaro uu wax bari jiray.
Al-Shabaab ayaa sheegatay inay ka dambeysay weerarka, isla markaana ku dishay ninka sheegtay Nabinimada oo ahaa Wadaadkii xarunta la weeraray degenaa.